Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Divay - Chenin Blanc Fampitandremana: Avy amin'ny Yummy mankany Yucky
Vaovao Mafana • culinary • Kolontsaina • Vaovao farany Brezila • Vaovao • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Divay & Fanahy
Ny Chenin Blanc dia voaloboka tsy voakarakara. Nahoana? Satria sarotra kokoa noho ny Chardonnay na Sauvignon Blanc ny fambolena sy fanaovana divay. Ny voaloboka dia mitaky fampifangaroana ny tany sy ny toetr'andro, ary fanamby ho an'ny mpanamboatra divay ny mandanjalanja ny hazo oaka sy ny safidy hafa manatsara tsiro.
Ny voaloboka dia ampahany amin'ny divay siny avy any Kalifornia ary hita amin'ny divay fotsy avy any Afrika Atsimo… any amin'ny Lohasahan'i Loire ihany no ahazoan'ny fiantsoana Vouvray amin'ny endriny feno – manomboka amin'ny vy ka hatramin'ny mamy. Ilaina ny fitandremana kely: tsy miantoka ny Chenin Blanc tsara ny fitadiavana Vouvray amin'ny marika. Mba hisorohana ny OOPS, mifidiana amin'ireo mpamokatra tsara indrindra.
• 2019 Domaine Pinon, Vouvray, Sec. 100% Chenin Blanc
Vouvray dia divay fotsy azo avy amin'ny voaloboka Chenin Blanc nambolena teo amoron'ny Reniranon'i Loire ao amin'ny distrikan'i Touraine any Frantsa, atsinanan'ny tanànan'i Tours, ao amin'ny kaominina Vouvray. Ny Appellation d'Origine controlee (AOC) dia saika natokana ho an'i Chenin Blanc irery ihany, Arbois voaloboka tsy fantatra sy kely dia avela (fa zara raha ampiasaina).
Andro farany tamin'ny fijinjana PINON tamin'ny faha-30 taonany
Efa ela ny fiompiana ao amin'io faritra io ary nanomboka tamin'ny Moyen Âge (na taloha kokoa) raha ny
Nasiana tanimboaloboka tao amin’ireo monasitera teo an-toerana ny Eglizy Katolika. Ny voaloboka dia fantatra amin'ny anarana hoe Pineau de la Loire ary mety ho avy any amin'ny faritry ny divay Anjou tamin'ny taonjato faha-9 ary nifindra tany Vouvray.
Tamin'ny taonjato faha-16 sy faha-17, ireo mpivarotra holandey dia nanara-maso ny fambolena voaloboka tao amin'ilay faritra hampiasaina amin'ny varotra divay amin'ny tsena any Londres, Paris ary Rotterdam. Ny voaloboka avy amin'ny faritr'i Touraine dia narindra ho fangaro faobe antsoina hoe Vouvray. Namboarina avy amin'ny lava-bato noforonina tamin'ny fihadiana vato tuffeau (vato sokay) izay nampiasaina hanamboarana ny Chateaux ao amin'ny Lohasahan'i Loire. Ny hafanana mangatsiaka sy tsy mitsaha-mitombo ao amin'ny efitra ambanin'ny tany dia tsara indrindra ho an'ny fandrosoana divay mamiratra vita amin'ny fomba nentim-paharazana methode champenoise ary nanjary nalaza tamin'ny taonjato faha-18 sy faha-19. Lasa AOC i Vouvray tamin'ny 1936 ary ahitana ny tanànan'i Vouvray miampy tanàna 8 eo akaiky eo (Chancay, Nouzilly, Vernou-sur-Brenne ary Rochecorbon).
Eo an-tampon'ny lembalemba no misy ny faritr'i Vouvray, nozarain'ireo renirano kely sy sakeli-dranon'i Loire. Ny renirano dia mandray anjara amin'ny toetry ny toetr'andro izay mampiroborobo ny fivoaran'ny holatra Botrytis cinerea izay miteraka lo tsara ampiasaina amin'ny famokarana divay mamy amin'ny fomba tsindrin-tsakafo.
Ny toetrandro dia kaontinanta amin'ny ankapobeny ary misy fiantraikany an-dranomasina avy any amin'ny Ranomasimbe Atlantika na dia any amin'ny 100 kilaometatra any andrefana aza no misy azy. Ny divay dia miankina amin'ny toetr'andro miaraka amin'ny fiovaovan'ny vintage isan-taona noho ny toetr'andro miovaova. Ny taonan'ny toetr'andro mangatsiaka kokoa dia manova ny ampahany betsaka amin'ny famokarana mankany amin'ny karazana divay maina kokoa, anisan'izany ny Vouvray mamiratra. Ny taonan'ny toetr'andro mafana kokoa dia mampiroborobo ny famokarana divay mamy kokoa amin'ny fomba tsindrin-tsakafo.
Ny toerana avaratra sy ny toetr'andro somary mangatsiatsiaka dia mahatonga ny fijinjana any Vouvray ho iray amin'ireo farany vita any Frantsa, matetika hatramin'ny Novambra. Ny karazana Vouvray dia manomboka amin'ny maina ka hatramin'ny mamy ary mbola manjelanjelatra ary voamarika amin'ny hanitra voninkazo malefaka sy ny tsirony.
Ny loko dia manomboka amin'ny mololo antonony (ho an'ny divay mamiratra) hatramin'ny loko mavo ka hatramin'ny volamena lalina (ho an'ny Moellex mamy efa antitra). Amin'ny ankapobeny, ny hanitra dia mifanindran-dàlana amin'ny lafiny malefaka kokoa amin'ny henjana ary mandefa pear, honeysuckle, quince ary paoma (maitso/mavo) mankany amin'ny orona. Mety misy soso-kevitra malefaka momba ny sakamalaho sy ny savoka (manolo-kevitra ny fisian'ny lo mendri-kaja… eritrereto i Sauterne). Ny tsiron'ny lanilany dia avy amin'ny mahia, maina ary mineraly mankany amin'ny voankazo sy mamy (arakaraka ny fomba).
Ny Sec dia manolotra divay maina (latsaky ny 8 g/L amin'ny siramamy sisa; ny varimbazaha maina indrindra amin'ny Vouvray) ary matetika dia haingana sy manome mineraly.
Voamarika ho anisan'ny tsara indrindra ao amin'ny faritr'i Vouvray ny tanim-boaloboka Pinon ary an'ny fianakaviana hatramin'ny taona 1786. Nanomboka ny asany tamin'ny maha-psychologistan'ny ankizy azy i Francois Pinon, naka ny fananan'ny rainy (1987). Heverina ho mpamboatra divay matotra i Pinon ary mifantoka amin'ny fambolena organika sy fitsabahana kely indrindra amin'ny famokarana divay izy. Ny trano dia notarihin'i Julien Pinon.
Ao amin'ny Vallee de Cousse no misy ny tanimboaloboka izay mandrakotra ny fototry ny vatosokay miaraka amin'ny flint (silex) ny tanimanga sy ny tany silika. Pinon dia manaraka rafitra iray izay ahitana ny fangadiana ny tanimboaloboka, ny fisorohana ny zezika simika sy ny pestiside ary ny fijinjana tanana. Ny fambolen-kazo vaovao rehetra dia atao amin'ny alalan'ny selection massale (fambolena divay frantsay amin'ny fambolen-boaloboka vaovao miaraka amin'ny fanapahana avy amin'ny voaloboka tranainy miavaka avy amin'ny fananana mitovy na mifanila); tsy misy clones garderie ampiasaina. 25 taona eo ho eo ny voalobony. Nahazo mari-pankasitrahana organika ny trano tamin'ny taona 2011.
Mitranga amin'ny barika hazo ny fermentation alkaola ary efa antitra amin'ny vy tsy misy pentina na vy (voankazo lehibe, eo amin'ny indroa eo ho eo ny haben'ny barrique Bordelaise) mba hahazoana fifandanjana eo amin'ny voankazo sy ny fihenam-bidy. Misy racking iray hanesorana ny fery mavesatra ary mijanona eo amin'ny fery tsara ny divay mandra-pahatongan'ny tavoahangy, izay maharitra 12 volana aorian'ny fijinjana mba hamitana ny divay. Manivana moramora ny divayny i Pinon mba hiantohana ny fahamarinany sy ny mety ho fahanterana.
Pinon dia mifidy faritra mirefy 0.6 hektara kokoa, tanimanga mandroso kokoa ho an'ny famenoana tavoahangy. 40 taona eo ho eo ny voaloboka. Ny voankazo dia alaina amin'ny tanana, voasokajy henjana ary potehina manontolo. Ny ranom-boankazo dia mikoriana amin'ny alàlan'ny sinton'ny siny ho an'ny fermentation masirasira ho azy izay maharitra 2-3 volana ary mijanona ho azy ao amin'ny efitrano mangatsiakan'i Pinon voasokitra ao amin'ny havoana tuffeau. Ny divay dia efa antitra amin'ny lelany tsara mandritra ny 4-5 volana amin'ny fifangaroan'ny hazo oaka efa nampiasaina manomboka amin'ny 500-litatra oak demi-muids ka hatramin'ny 20-hectoliter foudres.
Manolotra mavo mavo amin'ny maso ary mitondra citrus sy paoma mavo amin'ny orona miaraka amin'ny zezika voasarimakirana sy hodi-boasary. Ny lanilany dia mahita voankazo ampitomboina amin'ny zava-manitra sy citrus. Ny endriny lava dia manome mineraly voalanjalanja sy voadio. Mifanaraka tsara amin'ny salmon sy tuna.
Vakio eto ny Fizarana 1: Mianara momba ny divay ao amin'ny Lohasahan'i Loire amin'ny alahady NYC
Vakio eto ny Fizarana 2: Divay frantsay: Ny famokarana ratsy indrindra hatramin'ny 1970